विज्ञान/प्रविधि – Page6– ZoomNP
Breaking News: सोलुखुम्बुमा फेरी अर्को हेलिकप्टर दुर्घटना
काठमाडौं ९ असोज । सोलुखुम्बुको जुभिङमा माउन्टेन एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । इन्जिन फेल भएपछि आकष्मिक अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनाबाट हेलिकप्टरको नोजमा क्षति पुगेको छ ।
सोलुखुम्बु प्रहरीले पाइलट र यात्रु सबै सकुशल रहेको जनाएको छ । माउन्टेन एयरका अनुसार हेलिकप्टर लुक्लाबाट बिरामी लिन जुभिङ गएको थियो । र, काठमाडौं आउने योजना थियो तर, अवतरणका क्रममा केही समस्या देखिएको थियो । अहिले हेलिकप्टर बिरामी लिएर लुक्ला फर्किएको...
साबधान! काठमाडौंको कहिपनि सार्वजनिक स्थानमा बसेर कुनै गलत कार्य गर्दैहुनुहुन्छ भने तपाइँ नेपाल प्रहरीको कब्जामा परिसक्नु भयो!
काठमाडौँ, ८ असोज । के तपाईँ सार्वजनिकस्थानमा गलत कार्य गर्दै हुनुहुन्छ ? गर्दैहुनुहुन्छ भन्ने सचेत हुनुहोस्, तपार्इँ क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सिसिटिभी) क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाको अति व्यस्तस्थल, संवेदनशील क्षेत्र र प्रमुख सडक क्षेत्रमा सिसिटिभी जडान गर्ने कार्यलाई प्रहरीले तीव्रता दिएको छ ।
दुई सय ४१ ठाउँमा सिसिटिभी जडान रहेकोमा अब थप ९४ स्थानमा सिसिटिभी जडान गर्ने कार्य भइरहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका आयुक्त प्रतापसिंह थापाले बताए । चक्रपथ...
याहु चलाउनुहुन्छ? होशियार ५० करोडभन्दा बढी याहु इमेल चोरी भएको याहुले गर्यो खुलासा
एजेन्सी, वासिङटन—अमेरिकी कम्पनी याहुले आफ्ना ५० करोड प्रयोगकर्ताको इमेल विवरण चोरिएको खुलासा गरेको छ।
कम्पनीले गठन गरेको एक अध्ययन टोलीले सन् २०१४ मा आफ्ना ५० करोड प्रयोगकर्ताको इमेल विवरण ह्याक भएको र त्यसबाट उनीहरुका महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्याङ्क चोरिएको खु्लासा गरेको हो।
याहुले भनेको छ, ‘यो अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो साइबर अपराध हो र यसमा एक ठूलै गिरोहको हात रहेको छ।’ तर...
काठमाडौं रेफर गरिएकी रुकुमकी एक महिलाको हवाईजहाजमै मृत्यु
काठमाडौं ७ असोज । राप्तीको पहाडी जिल्ला रुकुमबाट काठमाडौं रेफर गरिएकी एक जना बिरामी महिलाको हवाईजहाजमा मृत्यु भएको छ। चौरजहारी अस्पतालले थप उपचारका लागि काठमाडौं रेफर गरेकी चौरजहारी नगरपालिका-५ लापुलेगाउँ निवासी ५४ वर्षीया वसन्ता केसीको हवाईजहाजमै बिहीबार दिउँसो मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ।
चौरजहारी विमानस्थलदेखि काठमाडांैका लागि उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजमा केसीको निधन भएको मृतकका देवर मोतीप्रसाद पोखरेलले बताए। बिहीबार दिउँसो २ बजेर २५ मिनेटमा उडेको जहाज काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गर्नुपूर्व नै केसीको मृत्यु भइसकेको थियो।
सिन्धुपाल्चोकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्पको फेरी धक्का
काठमाडौं, असोज ३ । आइतबार राति सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएर परकम्प गएको छ ।
राति १० बजेर ५७ मिनेटमा सिन्धुपाल्चोक गुम्बा गाविसलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ४ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
दुई साताअघि दोलखा केन्दूविन्दु भएर ४ दशमलव ५ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको थियो ।
गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि अहिलेसम्म पनि परकम्पको क्रम रोकिएको छैन ।
गत वर्षको गोरखा भूकम्पपछि हालसम्म ४ रेक्टर स्केलमाथिका ४ सय ६९ परकम्प गइसकेको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
#Breaking_News अहिले रातको ११ बजे नेपालमा ठुलो भुकम्पको धक्का बिस्तृत विवरण आउदै
२ असोज, काठमाडौं - अहिले रातको ११ बजे काठमाडौं लगायत मध्यभागमा ठुलो भुकम्प को धक्का महसुस भएको छ। अमेरिकी भुकम्प मापन केन्द्रका अनुसार नेपाली समयअनुसार आइतबार राती १०:५९ मा कोदारी केन्द्रबिन्दु रहेर ४.६ रेक्टर को भुकम्प गयको हो। भुकम्पको झटका काठमाडौं आसपास मा समेत ठुलो रहेको हाम्रा स्थानिय प्रतिनिधि ले जनाएका छ्न। बिस्तृत बिवरण को लागि ताजा अपडेट हेर्दै रहनुहोला।...
अण्डा पहिला बन्यो कि कुखुरा पहिला? अब रहेन बिबाद: वैज्ञानिकले पत्ता लगाए के बन्यो पहिला!
पहिला अन्डा बन्यो वा कुखुरा ? यो प्रश्‍न संसारमा धेरैले एक अर्कालाई राख्छन् किनकी धेरैलाई यसको जवाफ थाहा नहुन सक्छ। तर वैज्ञानिकहरुले संसारमा पहिला कुखुरा जन्मिएको र उसले अन्डा पारेको दाबी गरेका छन्। बेलायती वैज्ञानिकहरुका अनुसार अन्डाको जाँचपछि उनीहरुले कुखुरा पहिला जन्मिएको तथ्य पत्ता लगाएका हुन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार अन्डाको बोक्रामा एक विशेष तरिकाको प्रोटिन पाइन्छ र यो प्रोटिन कुखुराको अन्डाशयबाट निस्कन्छ। यसकारण...
पाइलटको सुझबुझपूर्ण निर्णयकै कारण यसरी बच्यो १६० जनाको ज्यान र नेपाल इएरलाइन्स
नेपाल वायुसेवा निगमको दिल्ली–काठमाडौं उडान नम्बर २१८ आइतबार राति इन्दिरा गान्धी विमानस्थलबाट उड्ने तर्खरमा थियो। क्याप्टेन सुवर्ण अवालेलाई म सघाइरहेको थिएँ। सामान्य अवस्था रहेकाले जहाजको कमान्ड मलाई नै सम्हाल्न दिइएको थियो।
त्यस बेलुकी त्यो जहाजलाई काठमाडौंबाट उडाएर दिल्ली पनि मैले नै लगेको थिएँ। हामी करिब सवा छ बजेतिर त्यहाँ पुगेका थियौं। नियमानुसार इन्जिनियरहरूले एक घन्टाको ग्राउन्ड अवधिमा जहाज परीक्षण गर्दा म पनि उपस्थित थिएँ। यसरी परीक्षण गर्दा...
नेपाली युवाबैज्ञानिक राजकुमारले न्युटनको चाल सम्बन्धि तेश्रो नियम त्रुटीपूर्ण भन्दै यसरी दिए चुनौती
युवावैज्ञानिक राजकुमार थापाले न्युटनको चालसम्बन्धी तेस्रो नियम त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उक्त नियमलाई सच्याउनुपर्ने चूनौति दिएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापाले हरेक अवस्थामा बराबर र विपरित प्रतिक्रिया नहुने घट्नाहरुपनि ब्रम्हाण्डमा घटिरहेका हुनाले उक्त न्युटनको चालसम्बन्धीको तेस्रो नियममा त्रुटि रहेको र उक्त नियमलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेका...
चन्द्रमा मा समेत भूकम्प! सुन्दा अचम्म लाग्छ भूकम्पको कम्पन १० मिनेट लामो!
भदौ २४ – चन्द्रमामा पनि धेरै भूकम्प जाने गरेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । चट्टानले बनेको साथै त्यहाँ भौगर्विक गतिविधि निकै कम हुने गरेपनि चन्द्रमामा धेरै भूकम्प जाने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । चन्द्रमामा जाने भूकम्पलाई मुनक्वेक भनेर चिनिन्छ भने त्यो ४ प्रकारका हुन्छन् । सूर्यको तापले हुने, उल्काहरुका कारण हुने भूकम्प र डिप क्वेक सामान्य हुने भएपनि स्वालो मुनक्वेक भने खतरनाक हुने गरेको छ । स्वालो मुनक्वेक ५ दशमलव ५ रेक्टर स्केलसम्मको हुने र यसको...